कति दिनमा आफ्नो ओछ्यानको तन्ना फेर्नुपर्छ वा धुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई धेरैले हल्का मान्न सक्छन्। केहीलाई यो सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न नहुने विषय पनि लाग्न सक्छ । तर यो हरेक मानिसलाई असर गर्ने विषय हो।...
शौच गर्ने बेलामा मोबाइल चलाउँदा एक महिलाको झण्डै ज्यान गएको घटना बाहिरिएको छ । अमेरिकाको सियाटल शहर नजिकैको ओलम्पिक नेशनल फरेष्ट भित्र रहेको ट्वाइलेटमा उक्त घटना भएको हो । वन घुम्न गएकी पीडित महिलाले...
काठमाडौँ । पुनेमा चेन्नई र बैंगलोरबीचको आईपीएल खेलको दौरान एक रोचक घटना क्यामेरामा कैद गरिएको छ । चेन्नईको इनिङ्समा एक युवतीले घूँडा टेकेर प्रेम प्रस्ताव राखिन् । युवकले पनि आफ्नी प्रेमिकालाई अँगालो हालेर औँठी...
बिरालोलाई लात हान्दा १० वर्ष जेल सजाँय !
काठमाडौँ, २१ वैशाख । इभिया टापुको समुद्री किनारको रेस्टुरेन्टमा तीन जना मानिस बाहिर खाना खाइरहेका छन् । दुई ओटा बिरालाका बच्चा उनीहरू नजिकै आएर खानेकुरा माग्छन् । तीमध्ये एक जनाले एउटा माछोलाई झुन्डाएर बिरालोलाई...
डोजर प्रयोग गरेर एटिएम मेसिन चोरेपछि….
काठमाडौँ, १५ वैशाख । भारतको महाराष्ट्रमा डोजर प्रयोग गरेर एउटाएटिएम मेसिन चोरी भएको छ । महाराष्ट्रको सांगली जिल्लाको मिरज तालुकास्थित आगरा चोकमा रहेको एक्सिस बैंकको एटिएम मेसिन चोरी भएको हो । चोरले डोजर ल्याएर...
समलिङ्गी पुरुषलाई राख्ने संसारको एकमात्र जेल
काठमाडौँ, १५ वैशाख । अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा चिसो र हावा चल्ने शहरमध्ये एकमा बनेको कूमा जेलमा थुप्रै गम्भीर राज कैद छन् । सन् १९५७ मा यसलाई ‘समलिङ्गी अपराध’ गर्ने पुरुषलाई कैद गर्ने विशेष उद्देश्यले पुनः...
शौचालयमा समोसा र अन्य खाजा बनाएको आरोपमा एक रेष्टुरेन्ट बन्द
काठमाडौँ, १४ वैशाख । शौचालयमा समोसा र अन्य खाजा बनाएको आरोपमा एक रेष्टुरेन्ट बन्द गरिएको छ । अचम्मको कुरा के हो भने रेष्टुरेन्टमा पछिल्लो ३० वर्षदेखि यस्तो काम हुँदै आएको थियो । स्थानीय अधिकारीले...
ठूला दलले दाङका दुवै उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवार टुङ्ग्याए
दाङ, ११ वैशाख । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लाका दुवै उपमहानगरपालिकामा प्रमुख दलहरुले उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याएका छन् । सत्तासाझेदार दलबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरी र उपप्रमुखमा नेकपा (एकीकृत...
इटालीमा रहेको पिसाको ढल्केको धरहरा पर्यटनको केन्द्र हो । उक्त ढल्केको धरहरा हेर्नका लागि बर्सेनि लाखौं मानिस त्यहाँ पुग्दछन् । त्यो विचित्र धरहरा वास्तवमै रहस्यले भरिएको छ । सदियौंदेखि त्यो धरहरा त्यसरी नै ढल्केको...
यो हो विश्वकै महँगो स्कूल, कति छ शुल्क ?
‘इन्स्टिते ले रोसी’ लाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो स्कूल बताइएको छ । यहाँ एकजना विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ पर्छ । स्विटजरल्याण्ड विश्वका...
पर्फ्युम बनाउनका लागि फूल वा सुगन्धित बोटबिरुवाहरूको मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । तपाईंलाई छक्क लाग्ला तर आकर्षक पर्फ्युमका लागि अचम्मका कुराहरू प्रयोग गरिन्छन् । त्यस्ता चीजमा ब्लु ह्वेलको बान्ता...
धक्काले फेरियो भाग्य : गलत नम्बरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको इनाम दिलायो
जब आपसमा कोही ठोक्किए वा धक्का लागेमा माफ माग्नुको अलावा अरु के हुन सक्ला र १ तर क्यालिफोर्नियामा एक महिलालाई धक्काको बदलामा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मिलेको छ । क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस काउन्टीमा...